linear economic ဆိုတာဘာလဲ | စီးပွားရေးဘဏ္ဍာရေး
Encarni Arcoya | 12/01/2022 11:48 | အဆင့်မြှင့်တင် 12/01/2022 11:59 | အထွေထွေစီးပွားရေး
အဆိုပါတစ်ခုမှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ အခြေခံမဏ္ဍိုင်များသည် စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် linear economic နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ယုံသည်ဖြစ်စေ၊ မယုံသည်ဖြစ်စေ ဤဌာနခွဲသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အောင်မြင်နိုင်သည်။
သို့သော် ၎င်းကိုရရှိရန်၊ linear economic သည် ဘာလဲ၊ အဘယ်ကြောင့် မကောင်းကြောင်း၊ ဤကိစ္စတွင် မည်သည့်အကျိုးဆက်များ ရှိလာနိုင်သည်ကို ဦးစွာ သိထားရမည်ဖြစ်သည်။
1 linear economic ဆိုတာဘာလဲ
2 Linear Economy ကို ဘာကြောင့် သုံးတာလဲ။
3 Linear Economy ရဲ့ အန္တရာယ်တွေက ဘာတွေလဲ။
Linear Economy ကို နားလည်ဖို့ ဥပမာတစ်ခုပေးရုံနဲ့ ပိုကောင်းတာမရှိပါဘူး။ သင်သည် မြေကြီးမှယူသော ကုန်ကြမ်းလိုအပ်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်တော့မည်ဟု စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ပျက်သွားသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ တရားဝင်မဟုတ်တော့သောကြောင့် လည်းကောင်း ၊ စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးသည် ။ လွှင့်ပစ်လိုက်ရုံပဲ။ သငျသညျဆက်လက်ထုတ်လုပ်သည်နှင့်သူတို့ကုန်ကြမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းက အဲဒါတွေကို အချိန်နဲ့အမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။ ဒီတော့ နောက်ဆုံးမှာတော့ အဲဒီကုန်ကြမ်းတွေမရှိတော့တဲ့ နေ့တစ်နေ့ ရောက်လာလိမ့်မယ်။
linear economic လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ထုတ်ကုန် နှင့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ထုတ်လုပ်ရန် ရိုးရာစံနမူနာကို ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်မရနိုင်သော ကုန်ကြမ်းများကို ယူဆောင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ပစ္စည်းများလျှော့ချခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါကုန်ကြမ်းများကို ပြန်လည်ရယူခြင်း (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မရှိပါ။
တကယ်တော့ တစ်ပြေးညီစီးပွားရေးရဲ့ ရလဒ်က အမှိုက် ဒါမှမဟုတ် မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စုပြုံနေတဲ့ အမှိုက်တွေဖြစ်ပြီး အဲဒါတွေက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
Linear Economy ကို ဘာကြောင့် သုံးတာလဲ။
ဤစီးပွားရေးပုံစံသည် ရှေးရှေးကတည်းက အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့ခေတ်၊ ကုန်ကြမ်းအမြောက်အမြား ကုန်သွားသောအခါ ဘာဖြစ်မည်ကို မစဉ်းစားမိစေဘဲ. ဤကိစ္စတွင်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုဗဟိုချက်နှင့် အမြတ်အစွန်းများကား၊ အချိန်နှင့် အနည်းငယ်မျှသော ကုန်ကျစရိတ်များဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ သို့သော် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်များကို မစဉ်းစားဘဲ။
ဒီအတွက် အထူးသဖြင့် အစပိုင်းမှာတော့ ထပ်ထည့်ရပါမယ်။ တန်ဖိုးဟူသည် အဘယ်အရာနှင့် ဤပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို မသိရှိခဲ့ကြသနည်း။ထုတ်ကုန် (စွန့်ပစ်ပစ္စည်း) ၏ နောက်ဆုံးဘဝစက်ဝန်းတွင်လည်း ပါဝင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ လိုင်းစီးပွားရေးစနစ် မွေးဖွားလာချိန်မှာတော့ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ အသိပညာနဲ့ ကိရိယာတွေ အများကြီး မရှိခဲ့ပါဘူး။
Linear Economy ရဲ့ အန္တရာယ်တွေက ဘာတွေလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သည်များ အားလုံးပြီးနောက်၊ linear economics သည် အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာမဟုတ်သော်လည်း အလွန်အပျက်သဘောဆောင်သည့်အရာဖြစ်သည်ကို ပိုမိုရှင်းလင်းလာသည်။ ၎င်းတွင် မကုစားပါက အပင်၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် လူသားတို့၏ ဖြစ်တည်မှုကို အဆုံးသတ်စေမည့် အန္တရာယ်များနှင့် အကျိုးဆက်များ ပါဝင်သည်။
တစ်ပြေးညီစီးပွားရေး၏ အဓိကအကျိုးဆက်များနှင့် အန္တရာယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု။ ယင်းတို့သည် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကို မီးရှို့ခြင်း၊ သစ်ပင်များခုတ်ထစ်ခြင်း၊ ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ယင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် မဖြစ်နိုင်ဘဲ လေထုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ရည်ညွှန်းတာလား? ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြင်ပအာကာသမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အသက်ရှုရန် မောပန်းစေသော ထိုအလွှာသည် ၎င်းနှင့်အတူ အသက်ရှုရန်နှင့် အသက်ရှင်ရန် ပို၍ခက်ခဲလာပါစေ။
နောက်ထပ်အန္တရာယ်တစ်ခုကတော့ ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ ထုပ်ပိုးမှုနဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သာမာန်အရှိဆုံးအရာက အမှိုက်ပုံးထဲသွား၊ မီးရှို့ပစ်တာ ဒါမှမဟုတ် ပြန်သုံးတဲ့ပြည်ပကို ပို့လိုက်တာလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ အမှိုက်တွေထဲမှာ ဆုံးသွားတာ။ ပြဿနာက ဒါတွေအားလုံးပါပဲ။ ပိုညစ်ညမ်းစေလိမ့်မယ်။ တစ်ပြေးညီစီးပွားရေးကို စွန့်ပစ်ရန် အမှိုက်ပုံတစ်ပုံကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဒါကို မဖြေရှင်းရင် ပိုကြီးလာမယ်၊ ပြဿနာက မြေကြီးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေတယ်။
အချက်အလက်အရ၊ နှစ်စဉ် သဘာဝသယံဇာတ တန်ချိန် ၉၀ ဘီလီယံ ထုတ်ယူနေပါသည်။ 2050 မှာ ဒီအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ဒီကိန်းဂဏန်းက နှစ်ဆတိုးလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ၎င်းတို့အားလုံး၏ 12% ကိုသာ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောကြောင့် အခြားအရာအားလုံးသည် linear cycle ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကို ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးစေမည့် မော်ဒယ်အမျိုးအစားတစ်ခုအကြောင်း ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ကြမ်းများ ကုန်ခမ်းသွားခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဆိုးရွားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လောလောဆယ် မတွေ့ရသေးသော်လည်း ယင်းတို့သည် ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို သိရှိကြပြီး နောင်တွင် ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည် နေစရာနေရာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲ အခြားနေရာရှာရန် အမျိုးအနွယ်အား ရှုတ်ချခြင်း၊ သင့်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် အရှုံးပေးလိုက်ပါ။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တစ်ပြေးညီစီးပွားရေးတွင်ပါ၀င်သည့် အန္တရာယ်များအကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူ၊ ၎င်းတို့သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကပ်ဘေးမဟုတ်သော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို စတင်စဉ်းစားလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို အားပေးသည့် ပုံစံများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ အဲဒါ ဘယ်ဟာလဲ? မြို့ပတ်ရထားစီးပွားရေး။
La မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးသည် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးချကာ ထိရောက်စွာအသုံးပြုကာ ၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ရယူရန်နှင့် အရင်းအမြစ်များကို ဖြုန်းတီးခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် တန်ဖိုးကို ဦးစားပေးရန်ဖြစ်ပြီး အမြတ်အစွန်းများစွာ မရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ထုတ်လုပ်သူတွေကို ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးပါတယ်။ ထုတ်ကုန်ကိုယ်တိုင်သာမက ၎င်း၏ပစ္စည်းများနှင့် ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ကြမ်းများပင် ဖြစ်သည်။ ပိုမိုတာရှည်ခံပြီး ပြုပြင်ရလွယ်ကူသော ထုတ်ကုန်များပြုလုပ်ရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းတို့ကို အားပေးခြင်းသည် သမားရိုးကျမျဉ်းကြောင်းကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ထိုစီးပွားရေး၏ အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းမှန်တယ်, ဥရောပတွင် စံနှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးကို ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံနှစ်ခုအဖြစ် ဂျာမနီနှင့် ပြင်သစ်တို့ကို မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။ စပိန်နိုင်ငံ၏ အခြေအနေတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြို့ပတ်ရထားစီးပွားရေးကို ကျင့်သုံးသော်လည်း ၎င်းသည် အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပြီး linear စီးပွားရေးသည် နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ 2020 ခုနှစ်တွင် Spain Circular 2030 မဟာဗျူဟာကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည့် စားသုံးမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုပုံစံသစ်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်များကို ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် linear economic ၏အကျိုးဆက်များကိုလျှော့ချရန်မျှော်လင့်ထားသည်။
ရလဒ်များသည် ရေတိုအတွင်း အောင်မြင်မည် မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ရပ်တန့်ဖို့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » linear economic ဆိုတာဘာလဲ